Bilaogy Archives - Page 2 sur 6 - Lemur Conservation Network
By Seheno Corduant on décembre 14, 2020 in Bilaogy
Covid-19 sy ny fankalazana ny andron’ny varika Tamin’ity taona ity dia nanasarotra ny fankalazana mivantana ny fisian’ny Covid-19. Nanova ny fomba fankalazana ny hetsika ho an’ny mpikambana sasany izany. Raha nisy ireo nisafidy ny hetsika virtoaly, dia nisy ireo nanao hetsika mivantana mba hahafahan’izy ireo manatona olona akaiky kokoa ho fanentanana momba ny fiarovana ny […]
By Seheno Corduant on novembre 12, 2020 in Bilaogy
1. Maherin’ny 100 ny karazana varika fantatra ankehitriny, ary amin’ny endriny sy habe maro samihafa! Misy karazany 111 ny varika, izay hita amin’ny endrika sy habe rehetra. Ny kely indrindra, ilay antsoina hoe Tsidin’i Madama Berthe, dia milanja manodidina ny 30g eo ho eo, ary ny lehibe indrindra, izay ny Babakoto, dia milanja 6 hatramin’ny […]
By Diamondra Ranaivoson on octobre 7, 2020 in Bilaogy
Inona izany Club Vintsy izany ? Ny Club Vintsy dia fikambanana mpiaro ny tontolo iainana mitsangana eny anivon’ny sekoly miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana, ary amin’ny ambaratonga rehetra amin’ny fianarana. Ny taona 1992 no niorina ny Club Vintsy voalohany. Miisa 750 izy ireo manerana an’i Madagasikara. Anisan’ny vokatry ny tetikasa “Ny Voaary” izay nokarakarain’ny WWF […]
By Seheno Corduant on septembre 7, 2020 in Bilaogy
Mahafaly anay eto amin’ny Lemur Conservation Network no mampahafantatra ny Ny Gasy Forestry Students’ Association – Madagascar (GFSA – Madagascar) , izay fikambanana voalohany indrindra mampivondrona ireo mpianatra eo anivon’ny Departemantan’ny Ala sy ny Tontolo Iainana ao amin’ny Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques (ESSA-Forêts), Oniversiten’Antananarivo. Isaorana betsaka ny ekipa izay tarihin’i R. Ntsiva N. Andriatsitohaina […]
By Seheno Corduant on août 2, 2020 in Bilaogy
Ny momba momba an’i Princiah Rabary Andriamihaja Princiah no anarako. 24 taona aho izao ary mpianatra taona faha 5 eny amin’ny Oniversiten’Antananarivo, fakiolten’ny siansa ary mianatra manokana momban’ny varika sy ny fiarovana azy ireo. Eo andalam-pamaranana ny fianarako aho ankehitriny, ary vao avy nahavita ny fidinana roa volana tany amin’ny valanjavaboary tsy miankina ao Berenty, […]
By Seheno Corduant on juillet 1, 2020 in Bilaogy
By Seheno Corduant on mai 4, 2020 in Bilaogy
Mba zarao aminay ny tantara sy ny mombamomban’ny fikambanana GSM Ny Geological Society of Madagascar (na GSM) dia fikambanana izay mampiray ireo olona eto Madagasikara (mpianatra, mpampianatra, eo anivon’ny sehatra akademika sy sehatry ny asa, ary ireo olon-tsotra) izay liana amin’ny « Géosciences » na Haibolantany. Ny fikambanana dia voafehin’ny hitsivolana ​ ​n°​ ​60–133 tamin’ny […]